ဗီယက်နန် « MMWeather Information BLOG
Follow up – စူပါတိုင်ဖွန်း HAIYAN – 31W
One comment Uncategorized အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PAKHAR နှင့် ကျရောက်နိုင်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
By mmweather.ygn, on April 1st, 2012%
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PAKHAR ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရဘွယ်ရှိသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှာ မုန်တိုင်း ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်မည့် လမ်းကြောင်းပေါ်မှ Can Gio Mangrove Biosphere Reserve ကြောင့် သက်သာရ ရနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ Boisphere အဖြစ် ကာကွယ်ထားသည့် ဒီရေတောမှာ မုန်တိုင်းဝင်ရာလမ်းကြောင်းတွင် စတုရန်းမိုင် ၃၀၀ ခန့် အကျယ်အဝန်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ အောက်ပုံတွင် မုန်တိုင်းဝင်ရောက်မည့် လမ်းကြောင်း ဦးတည်ရာအရပ်ပြ မြားအနီရောင်အောက်မှ အစိမ်းရောင် ကွင်းပြင်မှာ Can Gio Mangrove Biosphere Reserve ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ရရှိသည့် မုန်တိုင်း PAKHAR ဝင်ရောက်မည့် လမ်းကြောင်းမှာ တောင်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ကျသွားပြီး ဟိုချီမင်းစီးတီး လေဆိပ်အနီးမှ ကပ်၍ . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PAKHAR နှင့် ကျရောက်နိုင်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
2 comments Uncategorized မုန်တိုင်း PAKHAR အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဖြည်းညှင်းစွာ ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on March 31st, 2012%
မုန်တိုင်း PAKHAR ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား Phan Thiet နှင့် Vung Tau မြို့ ၂ မြို့ကြားမှ မနက်ဖန် တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီခွဲ (ဟောင်ကောင် စံတော်ချိန် ည ၇ နာရီမှ ဂ နာရီကြား)တွင် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာန Typhoon 2000 မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ဟောင်ကောင်စံတော်ချိန် = +8 UTC ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် = +6 hr 30 minutes
Tropical Storm PAKHAR (02W) continues to move slowly westward . . . → Read More: မုန်တိုင်း PAKHAR အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဖြည်းညှင်းစွာ ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
One comment Uncategorized အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NALGAE ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်အလယ်ပိုင်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on October 3rd, 2011%
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ အနည်းငယ်အားလျော့သွားတဲ့ NALGAE(22w) ဟာ အောက်တိုဘာ ၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ ရရှိတဲ့ data aတွ အရ မကာအိုမြို့တောင်ဘက် မိုင် ၃၁ဝ ခန့်မှာ ဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၉ မိုင်နှုန်း ခန့်နဲ့ ဆက်လက် ရွေ့လျားနေတာတွေ့ရပါတယ်။
NALGAE ရဲ့ မုန်တိုင်း ဗဟိုဟာ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းကို Sanya မြို့ပေါ်က ဖြတ်ပြီး လာမဲ့ ၃၆ နာရီအတွင်း ဝင်ရောက်ကာ ချက်ချင်းပဲ တုံကင်ပင်လယ်ကွေ့ကို ပြန်လည်ဆင်းသက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်၊ တုံကင်ပင်လယ်ပြင်မှ အနောက်ဘက်ကို ဆက်လက် ရွေ့လျားပြီး၊ လာမဲ့ ၇၂ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊ . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NALGAE ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်အလယ်ပိုင်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ